ऋणबाट मुक्त हुन घरको यो स्थानमा राख्नुहोस मयुरको प्वाँख ! – Annapurna Daily
ऋणबाट मुक्त हुन घरको यो स्थानमा राख्नुहोस मयुरको प्वाँख !
On Oct 21, 2021 828
मयुरको प्वाँखलाई पुजनीय र पवित्र मानिन्छ । भगवान श्रीकृष्णले टाउकोमा सधैं मयुरको प्वाँख धारण गर्ने भएको हुनाले पनि धार्मिकतासँग मयुरको प्वाँख जोडिएको हो ।मयुरको प्वाँख राख्नाले सौभाग्य ल्याउने धार्मिक विश्वास छ । वास्तुशास्त्रका अनुसार मयुरको प्वाँख घरमा राख्दा हुने फाइदाहरु धेरै छन् ।
जुन विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।यदी कुनै जरुरी काम पूरा हुँदाहुँदै रोकिएको छ भने आफ्नो बेडरुमको पूर्वीदक्षिण दिशामा मयुरको प्वाँख राख्नुहोस् । यसले रोकिएको काम पुरा हुनेछ ।यदि तपाईको पैसा कहीँ अड्किएको छ अर्थात तपाईले ऋण दिएर उक्त ऋण उठेको छैन भने पनि मयुरको प्वाँख घरमा राख्नले ऋण उठ्ने विश्वास गरिन्छ ।
यसैगरी यस्ता विभिन्न संकेतले शुभ र अशुभ कुराबारे जानकारी दिन्छ : धर्म शास्त्र जीवनमा विभिन्न काल ख ण्ड मा आउने विभिन्न संकेतले शुभ र अशुभ कुराबारे जानकारी दिने धर्म शास्त्रहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।त्यस्ता संकेतमा भविष्यमा हुने घ ट ना परिघटनाका बारेमा सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस्तै खालका संकेतकामा सपना पनि एक माध्ययम हो ।
विहीबारको दिन कुनै कुमारी कन्यालाई पहेँलो बस्त्रमा देख्नु भयो भने पनि शुभ संकेत मान्नुहोस् तपाईलाई धन लाभ हुन सक्छ ।यदी तपाईंको दाहिने भागमा या सिधा हातमा लगातार चिलाई रह्यो भने सम्झनुहोस् तपाईंलाई धन प्राप्त हुन सक्छ ।
जो व्यक्ति सपनामा मोती, गंगा, हार, मुकुट देख्छ उसको घरमा सधैं लक्ष्मीको बास हुन्छ । जसले सपनामा कुमालेले घैँटो बनाएको देख्छ उसलाई पनि धन प्राप्त हुन सक्छ । जो मानिसले आफुलाई टाउको खुइलिइएको अवस्थामा देख्छ उसलाई पनि धन प्राप्ति हुन सक्छ । यदी तपाई धन सम्बन्धी कामको लागि बाहिर जान कपडा लगाउँदै गरेको अवस्थामा तपाईंको हातबाट पैसा खस्यो भने तपाईंलाई धन प्राप्ति हुन सक्छ ।
कहिँ जाँदै गरेको अवस्थामा यदि बाटोमा सुन्दर महिला या कन्या देखियो भने त्यसलाई धनप्राप्तीको संकेत मान्न सकिन्छ ।यदि कोही सपनामा टाउको कन्याउँदै गरेको देखियो भने त्यसकै कारण पैसा मिल्न सक्छ । यदी आँखा कन्याउँदै गरेको देखे भने पनि पैसा मिल्न सक्छ । सपनामा गाडेको धन देखियो भने पनि सम्पत्ति वृद्धि हुन सक्ने मान्यता रहेको छ ।